DEG DEG: Solari oo si RASMI ah loogu dhiibay shaqada Real Madrid – Gool FM
DEG DEG: Solari oo si RASMI ah loogu dhiibay shaqada Real Madrid
(Madrid) 12 Nof 2018. Real Madrid ayaa si Rasmi ah xilka ugu dhiibatay Santiago Solari iyagoona ka saaray ku meel gaarnimada.
Halyeyga Los Blancos ayaa si ku meel gaar ah u sii hayay xilka kooxda kaddib markii la ceyriyay Julen Lopetegui bishii tagtay.
Solari ayaa adkaaday afarta kulan uu ilaa iminka hogaamiyay Camaaliqada reer Spain waxaana ugu dambeyn lagu abaal mariyay in si toos ah loogu Magacaabo macalinka hogaamin doona kooxda ilaa dhammaadka xilli ciyaareedkan.
15-gool ayuu dhaliyay afarta kulan halka labo gool oo qura laga dhaliyay kooxdiisa waana mida kooxda ku qancisay inay xilka ku aaminto.
Maanta ayayna u buuxsan tahay 14-ka maalmood, Los Blancos ayaana dooratay inay xilka si toos ah ugu dhiibato.
London oo dib u soo dhaweynaysa Samir Nasir....(Laacibka oo iminka ka gudbaya Tijaabada Caafimaad)
DEG DEG: Lionel Messi oo ku Guuleystay Laacibka sanadka iyadoo sidoo kale loo gacan galiyay Abaal marinta Pichichi